Indlu encane enethala endaweni yolwandle
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Isaac
Yindlu enezitezi ezi-3, etholakala enhliziyweni yendawo yabadobi, esatshalaliswa ngale ndlela elandelayo:
phansi, ikhishi kanye negumbi lokuphumula; esitezi sokuqala, igumbi lokulala negumbi lokugezela; esitezi sesibili, igumbi lokulala kanye nethala.
Ine-air conditioning kuwo womabili amakamelo okulala kanye nendawo yomlilo egumbini lokuphumula.
Indawo iyingqayizivele, eduze kwesikhungo kanye nolwandle, endaweni enhle kakhulu enazo zonke izinkonzo.
Itholakala esifundeni sabahamba ngezinyawo e-Baix la Mar, eyakhiwe imigwaqo emincane nezikwele ezincane ezigcwele impilo, amasimu nezindawo zokudlela.
Eduze kwendlu kunesitobhi sebhasi, kanye nolayini wesikebhe i-Dénia-Ibiza-Formentera. Ungahamba uye ogwini, enkabeni yedolobha, uye esidlweni sakusihlwa futhi uphuze isiphuzo ebusuku, indawo ilungile.
Ulwandle olunesihlabathi lwaseLas Marinas luqala ngamamitha ayi-100, lulungele imindeni. Amakhilomitha ambalwa ukusuka, ibhishi laseLas Rotas, elakhiwe ngamatshe amatshe namanzi asobala.
Enkabeni yesifunda kunemizi eminingi ebukekayo lapho ungachitha khona usuku, udle irayisi elihle noma uzipholise emfuleni. Futhi ukusuka e-Dénia, emahoreni amabili, ungaya e-Ibiza noma e-Formentera...
Indawo yabahamba ngezinyawo eyakhiwe izindlu eziphansi kanye nemigwaqo ewumngcingo evulekele izikwele ezinemigoqo ehlukene nezindawo zokudlela, izitolo zezingubo, ama-ice cream parlors, ikhemisi, isitolo samahora angu-24 kanye neMercadona imizuzu emi-5 ukusuka lapho.
Eduze kweNqaba, ichweba kanye nolwandle lwaseLas Marinas.
Ukungena kungenziwa ngokuzimela, nakuba ngizokujabulela ukukuqondisa endlini futhi ngitholakala kunoma yisiphi isimo, ngocingo nange-imeyili.
UIsaac Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: VT-471146-A